Izimali zase-Asia: iYen namaShekeli | Izindaba Zokuhamba
Izimali zase-Asia: iYen namaShekeli
UMariela Carril | | Amathiphu
Izinhlamvu zemali zase-Asia
Kusesenesikhathi eside ngaphambi kokuba thina emhlabeni sisebenzise imali eyodwa, ngesitayela samafilimu eqanjiwe wesayensi akhuluma ngomhlaba obumbene ngaphansi kohlelo olulodwa lwezepolitiki nolwezimali, ngaphandle kwezithiyo zomhlaba. Ingabe lokho kuyoke kwenzeke?
Okwamanje futhi yize kunezinguquko ezithile noma izimakethe ezijwayelekile, kusenezezimali eziningi. Namhlanje kumele sikhulume i-yen neshekeli, imali yase-Japan ne-Israel.
1 I-yen yaseJapan
Iyimali kazwelonke yaseJapan kanye nezezimali ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Igama, uma silitolika ngokwezwi nezwi, lisho indilinga o nxazonke futhi kubonakala sengathi imali yokuqala eyayikhuthaza ukuklanywa yakopisha i-peso yaseMexico.
I-yen yethulwa ngesikhathi sokubuyiselwa Meiji, inkathi emlandweni waseJapane ekhomba ukuphela kobu-feudalism kanye nokubuyela empilweni yezombusazwe yombusi ngemuva kweminyaka engamakhulu ambalwa yokugubuzelwa amakhosi anamandla kunawo wonke aseJapan endala.
Ukubuyiselwa kweMeiji nakho kwakusho ukwenziwa kwesimanje kwezwe, okubonakala kakhulu kule filimu Eyokugcina Samurai inkanyezi uTom Cruise futhi ephathelene nokwakhiwa kombuso wesimanje wesitayela saseYurophu.
Kule minyaka yezinguquko ezijulile emphakathini waseJapan kunini i-yen ifika ukufaka esikhundleni se- mon, uhlobo lwemali lwesikhathi esedlule, i-Edo Period.
Isungulwe ngokusemthethweni njengemali kazwelonke ngesenzo sika-1871 futhi kwakudingeka ukuthi izwe lingene ohlelweni lwesimanje ngaleso sikhathi olwaluzungeza Iphethini legolide.
Yini iGold Standard? Imali ngayinye yezwe ekhishwe ibinayo yayo ukusekelwa kwegolide futhi lokhu bekulokhu kwenzeka isikhathi esithile, yize kulezi zinsuku lelo bungu alisahlonishwa. Iqiniso ukuthi kusukela lapho i-yen yangena kumdlalo wezimali zohlelo ezintantayo futhi-ke, lonke ushintsho ohlelweni lwezezimali lube nomthelela kusukela ngaleso sikhathi esikude sango-1871 kuze kube manje.
Kahle izinhlamvu zemali ziyi-1, 5, 10, 50, 100 ne-500 y imali engu-1, 2, 5 no-10 yen. Izinhlamvu zemali zisetshenziswa kakhulu futhi amaJapane ahlala ewafuna ama-akhawunti.
Yizwe lapho ukheshe, imali, ngakho-ke yize ikhadi lesikweletu likhona futhi lithuthuka kakhulu, izitolo, izitolo ezinkulu nezindawo zokudla ziyohlala zithanda imali ebandayo neqinile. Gcina lokhu engqondweni uma ucabanga ukuvakashela iJapan.
Yigama lasendulo, i-Akkadian noma isiHeberu kepha enezimpande eSumeria yasendulo. Ngaleso sikhathi esikude kakhulu inani lalo lalixhunyaniswe ngqo nesisindo sikakolweniNgakho-ke kubalwa ukuthi ishekeli elilodwa lalilingana cishe no-180 amagremu kakolweni, ngaphezulu noma ngaphansi. Sikhuluma cishe eminyakeni engama-XNUMX XNUMX ngaphambi kukaKristu, ukuthola umbono.
Kwakunabantu abaningana ababesebenzisa leli gama kanye nale mali, kepha esikhundleni sokuhlobene nesisindo sikakolweni, base behlobene kakade nalezo zegolide nezesiliva. Namuhla izwe eliqhubeka nokusebenzisa ishekeli liyi-Israyeli. Lapha igama linesisindo esikhulu futhi luphawu lwesizwe.
U-Israyeli ube nezinhlamvu zemali eziningi kuwo wonke umlando wayo omfushane njengezwe: Gerah Kurus, Akce, iphawundi lasePalestine, ishekeli neshekeli ngaphambi kwaleli lamanje. El ishekeli, ishekeli noma ishekeli liyimali yakwa-Israyeli kusukela ngo-1980 yathatha indawo yehabhu lakwa-Israyeli.
Eminyakeni emihlanu kamuva nalokhu kwafakwa esikhundleni se- Nuevo UShekeli, ngezinhlamvu zemali nezikweletu, kunjalo, futhi ngenhloso yokuvuselela nokuthuthukisa umnotho wakwa-Israyeli. Ishekeli ngalinye lihlukaniswe laba yikhulu i-agorot (agora ngobunye).
Kukhona amanothi amashekeli angama-20, 50, 100 no-200 nezinhlamvu zemali eziyishumi, ezinhlanu no-10 kanye no-5, 1 no-50 i-agorot. Ngiyakutshela ukuthi uma uhlela ukuvakashela kwa-Israyeli ungangena ezweni ngemali yakwamanye amazwe wenze ushintsho olufanayo emabhange, ezindlini zokushintshanisa, emahhotela nasemaposini ezweni lonke.
Vele, kusukela kuwebhusayithi yezwe yezokuvakasha bayeluleka gcina amadola ambalwa noma ama-euro ngoba kunezindawo zezivakashi kakhulu ezemukela le mali yakwamanye amazwe ngqo.
Futhi, uma wake wahambela kwelinye izwe uyazi ukuthi akudingeki ukuthi ushintshe yonke imali ngasikhathi sinye kepha kancane kancane, ukusizakala ngamanani okushintshisana futhi ungalahlekelwa ngisho indibilishi. Kwa-Israyeli futhi ungakwazi ukukhipha imali emabhange uma bewamukela amakhadi akho esikweletu aphesheya.
Futhi-ke, uma ugcine amashekeli athile futhi useBen Gurion International Airport ungaphinde uwashintshanise. Izinga lokushintshanisa eliphezulu elifinyelela kuma-US $ 500 noma elilingana nalo kwezinye zezimali liyamukelwa.
Y uma imali yakho iyi-euro usenhlanhleni ngoba yize ishekeli elisha liyimali evumela ukukhula komnotho kwa-Israyeli, alikho ezingeni le-euro ngakho-ke unethuba.
Ekugcineni, Uma ungowaseSpain, ungagcini amashekeli ngoba eSpain ngeke ukwazi ukushintsha imali Ngakho-ke ungashiyi u-Israyeli engakashintshi konke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amathiphu » Izimali zase-Asia: iYen namaShekeli
Ungayithola kanjani indiza eshibhile: amaqhinga ama-5